J Zuma: State of the Address (isiXhosa)
Intetho kamongameli engobume besizwe ngobekekileyo umongameli Weriphabliki Yomzantsi Afrika, u-JG Zuma, Indibanisela Yezindlu Zepalamente, Ekapa 3 Kweyesilimela 2009
Sekela Mongameli weRiphabliki, uKgalema Motlanthe
Owayesakuba nguMongameli weRiphabliki, uThabo Mbeki,
Isisele sethu senyathi, uMongameli wokuQala woMzantsi Afrika wentando yesininzi, Isithwalandwe uNelson Rholihlahla Mandela,
Ababesakuba ngooSekela Mongameli,
iiNkulu-mbuso eziBalulekileyo kunye nooSomlomo bamaPhondo wethu;
Malungu aBekekileyo eCandelo leeNkundla;
uSihlalo weBhunga laseMzantsi Afrika looMasipala i-SALGA, oosodolophu kunye neenkokheli kwinkqubo yethu yooRhulumente basekhaya;
uSihlalo weNdlu yeeNkokheli zeMveli yeSizwe kunye neenkokheli zeMveli ezihloniphekileyo;
iRhuluneli yeBhanka enguVimba,
KubaLawuli-jikelele kunye neenkokheli zeenkonzo zikarhulumente
Mongameli wePan African Parliament, oHloniphekileyo u-Idriss Endele Moussa,
AbaBekekileyo abaThunywa besizwe kunye nooSomakhonkco;
Iindwendwe eziBalulekileyo, maqabane nabahlobo; Bemi baseMzantsi Afrika,
Ngomhla wama-22 kuTshazimpuzi, izigidi zabantu baseMzantsi Afrika baphuma bayokuvota. Basebenzisa ilungelo labo lenkululeko bekhuthazwa ngumnqweno wokuguqula ubomi babo bube ngcono.
Ngobuninzi babo, bangqina ukuba xa sisebenza kunye singenza ngcono ukulwa indlala nokwakha ubomi obungcono kumntu wonke.
Bakhuthazwe ngumbono wesizwe esiquka umntu wonke, uMzantsi Afrika ongowomntu wonke, isizwe esimanyeneyo noxa singafani nje, abantu abasebenza kunye besebenzela ubuhle obukhulu bako konke.
Siziva siwongekile sisigunyaziso sabavoti esigqibeleleyo esisinikwe ngabantu belizwe lethu, abakhethe urhulumente wabo ngeyona ndlela iqinisekisayo.
Isizwe sethu kule minyaka imbalwa idlulileyo sidlule kwelona xesha linemiceli-mngeni enzima. Kungumbulelo ukuba sibe nenkqubo yentando yesininzi esekelezelwe kumgaqo-siseko esebenza ngokugqibeleleyo, namaziko aluqilima, ukuba masibe sizoyisile ezo nzima ngokungena magingxigingxi nangesidima.
Umsitho wanaMhlanje ngumbiyozo woko kwenza ukuba le nkululeko isebenze. Ikwangumbiyozo wenkcubeko yethu yokuqhubekeka noxanduva oludibeneyo.
Oku kungqinwa kukubakho apha phakathi kwethu kwesisele sethu senyathi uMadiba, owathi wabeka isiseko seempumelelo zelizwe, kunye nobokuba owayesakuba nguMongameli uThabo Mbeki, wathi wakha phezu kweso siseko.
Ukuqhubela phambili kucacile phantsi kwemeko yokuba owayesakuba nguMongameli uKgalema Motlanthe nguSekela Mongameli weRiphabliki ngoku, emva kwenguqu ekungakhange kubonakale nomthungo wayo, into ke leyo esenze ilizwe elilodwa ngeendlela ezininzi. Bemi baseMzantsi Afrika,
Njengoko niyiqonda into yokuba, ukulwa nendlala kulilitye lembombo kwingqwalasela karhulumente wethu. Ngomhla we-9 kuCanzibe, xa kwakubekwa uMongameli esikhundleni, senza isibophelelo kubantu bethu nakwihlabathi ukuba:
"Lo gama kusekho abemi boMzantsi Afrika ababhubha ngenxa yezifo ezinokuthinteleka;
Lo gama kusekho abasebenzi abasokolayo ukondla iintsapho zabo kwaye kukho nabasokolayo ukufumana imisebenzi;
Lo gama kusekho iindawo zokuhlala ezingenawo amanzi acocekileyo, ezingena zindlu zisemgangathweni okanye ezingena gutyulo lufanelekileyo;
Lo gama kusekho abantu basemaphandleni abangakwaziyo ukuziphilisa impilo efanelekileyo ngemihlaba abahlala kuyo;
Lo gama kusekho abantu ababhinqileyo abajongene nokucalucalulwa, ukuxhatshazwa okanye impatho mbi;
Lo gama kusekho abantwana abangenayo indlela nokuba lithuba lokufumana imfundo efanelekileyo;
Asisayi kuze siphumle, kwaye singasayi kugevezela, kwiphulo lethu lokuyitshabalalisa indlala.
Ukufezekisa ezi njongo, urhulumente wethu uchonge zali-10 iindawo ezibalulekileyo emakuqalwe ngazo, eziyinxalenye yeNkqubo-sikhokelo yesiCwangciso-qhinga sesiGaba sokuQala sowama-2009 ukuya kuma-2014. Le nkqubo iveliswa phantsi kweemeko ezinzima zoqoqosho.
Kulo nyaka udlulileyo sibone uqoqosho lwehlabathi lungena kwixesha lentlekele engenakuzekeliswa tu kwiminyaka yamashumi eli xesha.
Nangona uMzantsi Afrika ungekachatshazelwa ngendlela amanye amazwe amaninzi achatshazelwe ngayo, imiphumela yayo iyabonakala kuqoqosho lwethu. Singene kwimeko yokudodobala kwezinga loqoqosho.
Kubaluleke kakhulu ngoku kunakuqala ukuba sisebenze kunye kwinkqubo enye nefanayo ukuhoya le ntlekele.
Sithathe njengenyathelo lethu lokuqala inkqubo-sikhokelo yethu eyimpendulo yoMzantsi Afrika kwintlekele yoqoqosho lwehlabathi, ngokugqitywe ngurhulumente, abasebenzi nabezoshishino kweyoMdumba kulo nyaka. Kufuneka sisebenze ngoku ukunciphisa impembelelo yokukwehla kwabo bantu bangabona bahlelekileyo.
Sesiqalile ukusebenzela ukunciphisa ukulahlekelwa kwabantu yimisebenzi. Kukho isivumelwano esingena mbophelelo phakathi kukarhulumente nabehlulelani bakhe kwezentlalo ngokuveliswa koqeqesho oluhlanganyenelweyo.
Abasebenzi ababeyakujongana nokudendwa ngenxa yokudodobala koqoqosho bayakugcinwa emisebenzini yabo ixesha elide baze baxhotyiswe ngezakhono kwakho. Iingxoxo malunga neenkcukhacha zokuba oko kuyakwenziwa njani zisaqhubekeka phakathi kwabehlulelani kwezentlalo kunye namaziko ayakuchatshazelwa ngamaphulo anjalo, kuquka nooGunyaziwe bamaCandelo eMfundo noQeqesho.
Sizakuwuxhasa umsebenzi weKomishoni yoXolelwano uLamlo nokwaHlulela (u-CCMA) ngokunceda abaqeshi nabasebenzi ngokufumana enye indlela yokwenza yeenkqubo zasemthethweni ezifanelekileyo kunokudenda.
Ukuza kutsho namhlanje, iikomishina zakwa-CCMA zisindise imisebenzi engaphezu kwamawaka amane ngeenkqubo zasemthethweni zokwenza lula, nokuqhubekeka ngokunikezela iingcebiso nenkxaso kubasebenzi abadendiweyo.
IMbumba yoPhuhliso lwamaShishini iphuhlise inkqubo yokuxhasa iinkampani ezisengxakini yezimali ngemali.Kwaye sizakuqinisekisa ukuba urhulumente izinto ezininzi neenkonzo uzithenga apha ekhaya, singakhange siludelele ukhuphiswano lwethu nehlabathi okanye singakhange sinyuse iindleko ngaphaya kwezinga elamkelekileyo.
Xa sisakhela phezu kweempumelelo zemigaqo-nkqubo yethu yokungenelela kwezoshishino, kuza kuphuhliswa isiCwangciso Msebenzi soMgaqo-nkqubo wezoShishino esiphezulu.
Amacandelo akhokelayo asele etyunjiwe ngaweemoto, amachiza, awokuvelisa isinyithi, ukhenketho, impahla nokwaluka kwakunye nawamahlathi. Ukongeza apho, ingqwalasela izakubhekiswa ekuzisweni kweenkonzo eluntwini, iimveliso ezithambileyo nomsebenzi wokwakha phakathi kwamanye, ngendlela yokuzama ukudala amathuba emisebenzi efanelekileyo.
Njengenxalenye yesiGaba se-2 seNkqubo yeMisebenzi yoLuntu eNatyisiweyo, iNkqubo yeMisebenzi yoLuntu iza kukhawuleziswa. Inikezela ngelona zinga lincinci lomsebenzi warhoqo kwabo bawusweleyo, lo gama iphucula umgangatho wobomi ekuhlaleni.
Ukwehla kwezinga lezoqoqosho kuza kuchaphazela isantya ilizwe lethu elikwazi ngalo ukuhoyana nemicelimngeni yezentlalo neyezoqoqosho elijongene nayo. Kodwa ke oko akuzukuyijika indlela yethu yezophuhliso.
Imiba ebalulekileyo emakuqalwe ngayo esele siyichongile, kunye nezicwangciso esasizithe thaca phambi kwabavoti, ziyakuhlala zingundoqo kwiinkqubo zalo rhulumente. Ngomoya omhle woluntu lwaseMzantsi Afrika, masibambane ngezandla sifune isisombululo kunye sisonke. Ixesha lifikile lokokuba sisebenze nzima ngakumbi.
Urhulumente wethu uza kujonga phambili, hayi ngasemva.
Amanyathelo acaciswe kwiNkqubo-sikhokelo yesiCwangciso-qhinga sesiGaba sokuQala sethu kufanele athathelwe ingqalelo iinzima ezibangelwe yintlekele yokudodobala koqoqosho. Oku kwehla akufanelekanga ukuba kubangele ukuba sizitshintshe ezi zicwangciso zethu. Endaweni yoko kufanele ukuba kusikhuthazele ekuziphumezeni ngesantya nangokuzimisela.
Le Nkqubo-sikhokelo iqwalasele za-10 iindawo ezibalulekileyo emakuqalwe ngazo.
Siyazibophelela ekubeni xa sisebenza kunye siza kukukhawulezisa ukukhula koqoqosho size siguqule uqoqosho ukuze ludale imisebenzi efanelekileyo nempiliso ezinzileyo.
Siza kuvelisa kakhulu inkqubo yokwakha iziseko zoncedo kwezoqoqosho nakwezentlalo. Siza kuphuhlisa siphumeze isicwangciso-qhinga sophuhliso lwamaphandle esibanzi esidibene novuselelo lwemihlaba nolimo kunye nokhuseleko lokutya.
Siza komeleza isiseko sezakhono sandise nenani labasebenzi. Siza kuwuphucula umfanekiso wezempilo kubo bonke abantu baseMzantsi Afrika. Xa sisebenza sonke kunye nabo bonke abantu baseMzantsi Afrika, siza kuqinisela ukulwa ulwaphulo mthetho norhwaphilizo. Siza kwakha uluntu oluhlalisana ngokumanyeneyo, olukhathalayo noluzinzileyo.
Xa sisebenzisana nelizwekazi lase-Afrika kwakunye nehlabathi jikelele, siya kuba silandela ukuqhubela phambili kwe-Afrika nokomeleza intsebenziswano namazwe ngamazwe.
Siza kuqinisekisa ulawulo nokusetyenziswa kwemithombo ngokuzinzileyo.
Kwaye, xa sisebenza nabantu size sixhaswe nangabasebenzi bethu bakarhulumente, siya kwakha isizwe esiphuhlayo, siphucule iinkonzo zikarhulumente size someleze namaziko wethu entando yesininzi.
Kuluvuyo nenyhweba kum ukuba ndikhankanye iindawo ezingundoqo zomkhomba ndlela wethu. Ukudalwa kwemisebenzi efanelekileyo kuya kuba sembindini wongaqo-nkqubo wethu wezoqoqosho kwaye kuya kuba nefuthe ekutsaleni abatyali-zimali nakumaphulo okudala amathuba omsebenzi.
Ngokuhambelana nezi zithembiso zethu, siza kuqhubela phambili ukukhulisa uqoqosho oluquka wonke umntu ngokuthe chatha.
Kulo meko, siza kusebenzisa iinkqubo zikarhulumente ezifana nokwenzelela, ukubonelela ngempepha-mvume nangenkxaso yemali ukunceda amashishini amancinci nalawo asakhulayo kwakunye nokukhuthaza ukuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo yokuXhotyiswa kwabaNtsundu ngokuBanzi kwezoQoqosho kunye nenkqubo yokubonelela ababevinjwe amathuba. Oko kuphumeza kuya kwenziwa ngokwamkela imfuneko yokulungisa ukungalingani kwangaphambili.
Lo nguqu iyakwenziwa ngokuxhasa abantu ababhinqileyo, ulutsha nabantu abakhobazekileyo.
Siya kuyinciphisa imiqobo yemithetho yezolawulo kumashishini amancinci. Imeko yokucinezelwa yimithetho iphakanyiswe izihlandlo ngezihlandlo leli candela. Ngenye indlela yokulamla ukudala imeko elula kutyalo mali, urhulumente uza kusebenzela ukuba kubekho inkqubo yobhaliso mashishini enye nedibeneyo.
Oku kuyakuphucula indlela ekuphathwa ngayo abathengi inciphise neendleko zokwenza ushishino eMzantsi Afrika.
Esinye seziqalelo zethu ezibalulekileyo kwiphulo lethu lokudala amathuba emisebenzi yiNkqubo yeMisebenzi yoLuntu eNatyisiweyo (i-EPWP). Inani lamathuba emisebenzi ebesijongise kulo ekuqaleni lesigidi esinye semisebenzi silifezile.
Isigaba sesibini sale nkqubo sijolise ekudaleni amathuba emisebenzi amalunga nezigidi ezine ngowama-2014.
Ukususela ngoku ukuya kweyoMnga wama-2009, sizimisele ukudala amathuba emisebenzi amalunga nama-500 000.
Lo gama sidala amathuba emisebenzi nawoshishino, urhulumente uyayiqonda into yokuba abanye abemi baseza kuqhubekeka ukulindela inkxaso-mali karhulumente. Inkxaso-mali karhulumente iya kusoloko iyeyona ndlela ivakalayo yokulwa indlala. Ukusukela kumhla wama-31 kweyoKwindla wama-2009, abantu abafumana inkxaso-mali karhulumente bebengaphezu kwezigidid ezili-13, abangaphezu kwezigidi ezisi-8 kubo ngabantwana. Siyiqonda kakuhle into yokuba kukho imfuneko yokuba inkxaso-mali karhulumente siyidibanise namathuba omsebenzi okanye awoshishino khona ukuze sikhuthaze ukuzenzela phakathi kwabo bakwaziyo ukuzisebenzela ngokwasemzimbeni. Ingakumbi nangakumbi ngeli xesha, abamelwane mabancedane. Eli lixesha lomanyano. Masincedane njengabamelwane.
Masivumelane ukuba akukho mntwana uya kulala elambile ngenxa yokuba abazali bakhe bengaphangeli. Ukuba ngaba singamanyana sisebenze kunye, singenza ngcono.
Zindwendwe ezibalulekileyo, njengenxalenye yesicwangciso-qhinga sesibini seendawo ezibalulekileyo ekufuneka kuqalwe ngazo siza kuqhubekeka ngenkqubo yethu yokwakha iziseko zoncedo kwezoqoqosho nakwezentlalo.
ICandelo loPhuhliso lweziSeko-zoncedo likarhulumente elisanda ukuqulunqwa liya kuqinisekisa ukuba inkcitho ecetyiweyo yeziseko zoncedo yeebhiliyoni ezingama-R787 ebinikezelwe kuhlahlo lwabiwo-mali lwalo nyaka icetyelwe ngokufanelekileyo yaza yasetyenziswa ngokufanelekileyo.
Le mali ikwaquka nolwabi-mali lwenkqubo yokwakhiwa kwezikolo, izithuthi zikawonke wonke eziquka nenkqubo yeebhasi eziquqa zibuyelela, ezezindlu, amanzi nogutyulo.
Enye yeeprojekthi ezinkulu zotyalo-mali kwiziseko zoncedo ikwiNdebe yeHlabathi yeBhola-ekhatywayo ye-FIFA yama-2010. Thina, njengorhulumente nesizwe ngokubanzi, sabhambathisa ukuba iNdebe yeHlabathi iya kusishiyela ilifa esiyakuzingca ngalo abayakuthi abaNtwana bethu nabahlali belizwe lethu baxhamle kulo kwiminyaka emininzi ezayo.
Sisendleleni echanekileyo yokuphumeza zonke izibophelelo zethu kwaye sizimisele ukunika ihlabathi eyona Ndebe yeHlabathi lingazange layibona.
Sime ngomumo ukumisa zonke izinto ngendlela ukwenza umnyhadala weNdebe yoManyano, eqala ngomhla we-14 kweyeSilimela, impumelelo enkulu. KuTshazimpuzi kulo nyaka, ndanikezela isiqinisekiso kwiinkokheli zoshishino lweeteksi sokumiswa kothethathethwano olumalunga nokusebenza kwenkqubo eDibeneyo yeeBhasi eziQuqa ziBuyelela kude kube semva konyulo.
Sigqibe ekubeni masinikezele ixesha elongezelelweyo lokuhoyana ngokugqibeleleyo neenkxalabo zolu shishino. Ngomhla we-11 kweyeSilimela uMphathiswa wezoThutho uza kuqalisa iingxoxo kunye nolushishino.
Le ntlanganiso iya kuba sisiqalo sothotho lweengxoxo kunye nabo bonke abo bachatshazelwa yinkqubo ye-BRT. Sinethemba elikhulu lokuba imiba engekasonjululwa iya kuxoxwa ngendlela eya kwanelisa bonke abo bachaphazelekayo.
Oku kuya kuquka nomba obalulekileyo wokuba baya kuxhamla njani bonke kweli phulo abo bachaphazelekayo. Malungu aHloniphekileyo,
Olunye uphuhliso oluya kuphucula iNdebe yeHlabathi kukunikezelwa kweziseko zoncedo ezinikezela ngosasazo lwedijithali kunye nezixhobo zokusasaza ezisasaza intshukumo zamaza.
Lilonke, siza kuqinisekisa ukuba iindleko zothungelwano ngomnxeba, ngeradiyo, njalo-njalo ziya ncitshiswa ngale projekthi isendleleni yokunabisa umthamo wezamaza ngokubanzi. Kolu phuhliso lunomdla kangaka kufuneka siqinisekise ukuba iindawo ezisemaphandleni asizishiyi ngasemva.
Njengenxalenye yophuhliso lweziseko zoncedo lwentlalo siza kubonelela ngezindlu ezimi kwiindawo ezifanelekileyo ezifikelekayo neendawo zokuhlalisa uluntu ezifanelekileyo. Siza kuqhubeka phantsi kokuqonda ukuba iindawo zokuhlalisa uluntu azikho nje malunga nokwakhiwa kwezindlu.
Zimalunga nokuguqulwa kwezixeko zethu needolophu nokwakha uluntu oluhlalisana ngokumanyeneyo, ngokuzinzileyo nolukhathalayo oluhlala kufutshane neendawo zempangelo neendawo ezenza intlalo ibe lula namnandi, kuquka neendawo zemidlalo nezolonwabo.
Ngalo moya, siza kusebenza nePalamente ukukhawulezisa inkqubo yokuqulunqwa koMthetho oyiLwayo woLawulo lokuSetyenziswa koMhlaba. Xa sisebenza kunye nabantu bakuthi emaphandleni, siza kuqinisekisa ngesicwangciso-qhinga sophuhliso lwamaphandle esibanzi esidibene novuselelo lomhlaba nolimo kunye nokhuseleko lokutya, njengomba wesithathu kwimiba yethu ebalulekileyo ekufanele kuqalwe ngayo.
Ndingathanda ukusebenzisa eli thuba ukudlulisa uvelwano lwethu olunzulu kusapho lukaSekela Mphathiswa wezoLimo, uDirk Du Toit, osishiye kule veki. Indima yakhe siya kuhlala siyikhumbula.
Abantu basemakhaya nabo banelungelo lokuba nombane namanzi, izindlu zangasese ezigungxulwayo, iindlela, iindawo zolonwabo nezemidlalo kunye neendawo zokuthenga eziphucukileyo njengasezidolophini. Nabo banelungelo lokuncedwa kwezolimo ukuze bazityalele imifuno kunye nokunye, bafuye nokufuya ukuze bakwazi ukuziphilisa. Sizimisele ukuluqala eli phulo lokwakha iziseko zoncedo ezindaweni zasemaphandleni. Xa sibambisene nabahlali, iinkosi, ooceba nezibonda sizokwazi ukuwukhawulezisa lo msebenzi. Sicela abantu basemaphandleni ukuba balungiselele ukusixelela ukuba zeziphi izinto ezingxamisekileyo abazisweleyo. Xa sisebenza ngokuphathisana singenza ngcono.
Somlomo oHloniphekileyo noSihlalo,
Ekubeni sifundile kumaphulo ophuhliso lwasemaphandleni angaphambili, siye sakhetha uMasipala oMkhulu waseGiyani eLimpopo njengowokuqala kule projekthi yokulinga kwiphulo eli. Ezi projekthi ziya kuba nemfundiso kwilizwe lonke.
Ukongeza apho, siza kusebenza sigxininise kuvuselelo lweedolophu zasemaphandleni ekujoliswe kuzo, ngenkxaso-mali efana nenkqubo yeNkxaso-mali yoPhuhliso lwaseBumelwaneni. Ngale ndlela, iindawo ezingqonge iidolophu ziyakuxhamla ngokukhula kwezoqoqosho lwazo.
Ngawo onke la mangenelela, sikulungele ukuyiguqula imbonakalo yeendawo zasemaphandleni kwilizwe lethu.
Imfundo iya kuba ngundoqo kwimiba ephambili ebalulekileyo kule minyaka mihlanu ilandelayo. Sifuna ootitshala bethu, abafundi nabazali basebenzisane norhulumente ekuguquleni izikolo zethu zibe ngamaziko empumelelo yokugqwesa.
Inkqubo yokuPhuhlisa abaNtwana abasaKhulayo iza kunyuswa, ngenjongo yokuqinisekisa ilungelo jikelele lokungena kwisiGaba R nokuphinda phinda inani labantwana abaminyaka isuka kwi-0 ukuya kwi-4 seminyaka ubudala ngowama-2014.
Siya kuphinda phinda oko kwethu kungaxoxisiyo. Ootitshala mababe sesikolweni, emagumbini okufundela, ngexesha, bafundise, bangasileli emsebenzini wabo kwaye kungabikho kuphathwa kakubi kwabantwana! Abantwana kufanele babe semagumbini wabo okufundela, ngexesha, bafunde, bahloniphe iititshala zabo baze nabo bahloniphane, benze nomsebenzi wabo wesikolo ekufanele bawenze ekhaya. Ukuphucula ulawulo ezikolweni, uqeqesho olusesikweni luya kuba ngumqathango ophambili phambi kokuba utitshala onyuselwe abe yinqununu okanye intloko yecandelo.
Ndiza kudibana neenqununu zezikolo ukwabelana nazo ngombono wethu wokuvuselela inkqubo yethu yezemfundo.
Bemi baseMzantsi Afrika,
Siza kuwandisa amalinge wethu okukhuthaza bonke abantwana ukuba bayigqibe imfundo yabo yasesekondari.
Eyona njongo kukwandisa izinga lobhaliso kwizikolo zesekondari liye kuma kuma-95 ekhulwini ngowama-2014. Sikwakhangela neendlela zokuvelisa izinto ezintsha ngeenjongo zokubuyisela abo bantwana bathi bashiya isikolo phakathi kwakhona kwinkqubo yemfundo, size sibanike nenkxaso.
Malungu aHloniphekileyo, sixhalabe kakhulu ngeengxelo zootishala abaxhaphaza ngokwesondo baze baphathe gadalala abantwana, ingakumbi abangamantombazana.
Siza kuqinisekisa ukuba imiGaqo engokuXhaphaza ngokwezeSondo nobuNdlobongela eZikolweni zikaRhulumente isasazwa ngokubanzi, kwaye abafundi nootitshala bayayazi kwaye bayayithobela.
Naziphi na iititshala ezisebenzisa igunya namndla azo kakubi ngokuthi zingene kunxulumelwano lokwabelana ngesondo nabantwana, siza kuzithathela amanyathelo aqatha kakhulu, ngendlela engqwabalala.
Ukukhulisa inkqubo yokufunda ithuba elide, iMfundo esiSisekelo yabaDala noQeqesho i-Kha ri Gude iza kwandiswa.
Mafela ndawonye, Malungu aHloniphekileyo, Kufuneka siqinisekise ukuthi uqeqesho namaphulo okuphuhlisa izakhono kwilizwe lethu ayakhawulelana neemfuno zoqoqosho.
Icandelo lokwaNdisa iMfundo noQeqesho neekholeji ezingama-50 kunye neekhampasi ezili-160 elizweni jikelele ziya kuba ziziseko zoqeqesho lokuphuhlisa izakhono.
Siya kuphucula ukufikelela kwimfundo ephakamileyo kubantwana abaphuma kumakhaya ahluphekileyo kwaye siqinisekise inkqubo yenkxaso-mali ezinzileyo eziyunivesiti.
Sikhathazeke kakhulu kukwehla komgangatho wezempilo, okuphinde kwenziwa nzima ngakumbi kukukhula okuthe chu komthwalo wezifo kule minyaka ilishumi elinesiqingatha idlulileyo.
Sizimisele iinjongo eziphezulu zokuqhubekeka ukwehlisa ukungalingani kwindlela yokubonelelwa ngoncedo lwezempilo, sandise inani labasebenzi, sihlaziye izibhedlele nekliniki siqinise ukulwa nembandezelo eyintsholongwane kagawulayo kunye nogawulayo, isifo sephepha nezinye izifo. Kufuneka sonke sisebenzele ukuphucula ukuphunyezwa kwesiCwangciso esiBanzi soNyango, uLawulo nokuNyamekela iNtsolongwane kaGawulayo kunye noGawulayo ukuze kwehle inani labantu abosuleleka yi-HIV ngama-50% ngonyaka wama-2011. Sikwafuna ukufikelela kuma-80% abantu abafuna amachiza athomalalisa ulwamvila lwentsholongwane kagawulayo (i-ARV) ngonyaka wama-2009.
Siza kusungula isikimu se-Inshorensi yeSizwe yezeMpilo ngendlela engamanqanaba ongezelekayo. Ukuze siqalise nge-Inshorensi yeSizwe yezeMpilo, ukuvuselelwa ngokutsha kwezibhedlele okungxamisekileyo kuya kwenziwa ngentsebenziswano yoBudlelwano bukaRhulumente noShishino laBucala.
Sikwanika ingqalelo kwimiba ephathelene nokuhlawula abasebenzi abazingcali kwezempilo ukususa intandabuzo kwiinkonzo zethu zezempilo.
Ngokusebenzisana sonke masenze ngcono ukunyusa umgangatho wezempilo ngokuhambelana neeNjongo zoPhuhliso zeMileniyamu yeZizwe eziManyeneyo ukwehlisa intlupheko ngesiqingatha ngonyaka wama-2014.
Xa sisonke masenze ngcono ukulwa ulwaphulo mthetho. Injongo yethu kukuseka inkqubo yezobulungisa noliwo lwaphulo mthetho eguqukileyo, edibeneyo, yala maxesha, exhotyiswe ngokufanelekileyo nelawulwa kakuhle.
Kukwabaluleke ngokugqithisileyo ukuphucula ukusebenza kakuhle kweenkundla nendlela abasebenza ngayo abetshutshisi nokuqaqambisa inkonzo zokucupha, ezophando olunobuchwepheshe, neenkonzo zobuntlola. Lo msebenzi sele uqalisile ngokwenene kwaye uza kwenziwa ngamandla nokomelela.
Phakathi kwezinto ekujoliswe kuzo ngokungxamisekileyo kukuqinisekisa ukwandiswa kwenani labetshutshisi nabasebenzi beBhodi yoNcedo kwezoMthetho. Siza kwenza njalo nakubecuphi.
Siliguqule igama lobuPhathiswa obuchaphazelekayo elisuka kuKhuselo noKhuseleko laba lelezobuPolisa ukugxininisa ukuba sifuna amandla okusebenza ngokwenene kumsebenzi wobupolisa. Oku kuya kunciphisa ulwaphulo-mthetho olunobuzaza nolunobundlobongela ngesi-7% ukuya kwi-10% ngonyaka.
Eyona ngqwalasela ibalulekileyo iza kunikezelwa nasekulweni ulwaphulo-mthetho oluququzelweyo, kwakunye nobundlobongela obujoliswe koomama nabantwana.
Lo gama siluvuyela utyalo-mali olwenziwa lushishino lwabucala kushishino lwezokhuseleko, siya kuphucula indlela olu shishino olulawulwa ngayo.
Phakathi kwamanye amaphulo angundoqo, siza kuqala inkqubo yokumisela i-Arhente yokuLawula iMida, siqinise iinzame zethu zokulwa nolwaphulo-mthetho olwenziwa ngekhompyutha nobusela benkcukacha zokuzazisa, nokuphucula iinkqubo zeentolongo zethu ukunciphisa ukwaphula umthetho ngokuphinda-phindiweyo.
Ndinqwenela ukugxininisa inkxaso yethu ekuguqulweni kweenkundla okuqhubekayo.
Inguqulelo kufuneka ilungise imiba engundoqo efana nokuqaqambisa ukuzimela kweenkundla, ukumilisela neengcambu iinkqubo zangaphakathi zokuba nakho ukucacisa nokunika iimpendulo kwakunye nokuqinisekisa ukufikelelwa ngokuzeleyo kwezobulungisa ngabo bonke abantu.
Impumelelo yenkqubo yentando yesininzi iyonke ixhomekeke kubudlelwane bembeko komnye nomnye kunye nomoya wokuphathisana phakathi kwesiGqeba sokuLawula, uWiso-mthetho kunye neeNkundla. Oku kubaluleke kakhulu kwintando yethu yesininzi esekelezelwe phezu komgaqo-siseko. Somlomo oHloniphekileyo noSihlalo,
Siphinda-phindile ukukuchaza ukuzinikela kwethu ekulweni norhwaphilizo kwiinkonzo zikarhulumente.
Siza kunika ingqwalasela eyodwa ekulweni norhwaphilizo nenkohliso ekunikezelweni kwemisebenzi nakwiinkqubo zeziniki maxabiso, izicelo zeempepha mvume zokuqhuba, inkxaso-mali karhulumente, izazisi nobusela bamadokhethi wamapolisa.
Mandigxininise ndithi sonke sinendima ekufuneka siyidlalile kule mfazwe yokulwa nolwaphulo-mthetho.
Kufuneka sithathe inxaxheba ngokugqibeleleyo kwiQonga lobuPolisa nabaHlali. Kufuneka sikuyeke ukuthenga izinto ezibiweyo, oko kukhuthaza ulwaphulo-mthetho.
Masiluxele ulwaphulo-mthetho sincedise namapolisa ngolwazi olunokukhokelela ekubanjweni kwabenzi bobubi. Ngale ndlela, siza kuhambela phambili ekuyeni kwintlalo engenalwaphulo-mthetho.
Malungu aHloniphekileyo, ukusekela ngowe-1994 besisoloko sizama ukwakha intlalo emanyeneyo nenobudlelwane kwimvelaphi yethu engamaqhekeza. Siya menywa ke ukuba siqhubekeke ngezo njongo zokukhuthaza umanyano noxa sohlukile omnye komnye nje kwaye siphuhlise inkqubo yokwabelana ngezithethe, esekelezelwe phezu komoya wembumba yamanyama noluntu olukhathalayo.
Inkqubo yethu yokwabelana ngezithethe kufanele isikhuthazele ekubeni sibe ngabemi abagqibeleleyo kuvuselelo lwelizwe lethu. Kufuneka sakhe ubuzwe obunye nobufanayo nobuthandazwe.
Kufuneka siphuhlise ukuzimanya okufanayo nelizwe lethu, uMgaqo-siseko kunye neempawu zesizwe. Ngalo moya, siza kuwukhulisa uMhobe weSizwe neflegi yelizwe lethu nazo zonke ezinye iimpawu zesizwe.
Abantwana bethu, mabafundiswe besebancinci, ukuwugqalela uMgaqo-siseko kunye neempawu zesizwe, kwaye bayazi ukuba kubaluleke ngantoni ukuba ngummi waseMzantsi Afrika.
Siza kuqinisekisa ngendlela efanayo yokuqwalasela ukutshintshwa kobume beendawo namagama eendawo. Oku kufuneka kunikezele ithuba lokubandakanya bonke abantu baseMzantsi Afrika ekuqhubeleni phambili ubuzwe obuquka wonke umntu, ukuzinzisa ukuqonda imbali namagugu wethu.
Imidlalo sisixhobo esinamandla sokwakha isizwe. Ngokusebenza kunye kufuneka sixhase onke amaqela wethu esizwe ukusukela kwiBafana Bafana ukuya kwii-Proteas kunye namaBhokobhoko; ukusekela kwiBanyana Banyana ukuya kwiParalympians.
Amaqela wethu angenza ngcono kuphela xa siwaxhasa.
Ndivumeleni ukuba ndisebenzise eli thuba ukuvuyisana namqela wethu esizwe ngendlela adlale ngayo kule veki iphelileyo, ade amathathu aphumelele ngokuncamisayo.
Iqela lesizwe lababhinqileyo lebhola yomnyazi lisenze sanebhongo ngokuphumelela umdlalo we-Tri-Nations Netball Challenge. Sithi halala kwi-Sevens Springbok ezithe zabaziNtshatsheli ze-IRB Seven World Series – kwaye ndingazilibelanga ii-Blue Bulls ezithe zaphumelela umdlalo wamagqibela kankqoyi we-Super 14 ngendlela encamisayo!
Sithatha eli thuba ukunnqwenela amaBhoko-bhoko okuhle kodwa kwimidlalo eluthotho ezayo aza kuyidlala nee-British ne-Irish Lions.
Kucacile ukuba kufanele sityale imali eninzi kuphuhliso lwemidlalo. Siza kuyikhawulezisa inkqubo yokuvuselelwa kwemidlalo yezikolo kwaye siza kuqinisekisa ukuba ziyinxalenye yezifundo. Ukongeza apho siza kuqinisekisa ukuba ubonelelo lwezixhobo zemidlalo kwindawo ezihlwempeke kakhulu kuqalwa ngazo.
Kule minyaka idlulileyo sazibophelela ekubeni negalelo ekwakheni i-Afrika engcono kunye nehlabathi elingcono.
Eyona njongo ingundoqo karhulumente kwesi sigaba sokuqala kukuqinisekisa ukuba ubudlelwane bethu namazwe angaphandle bunegalelo ekudaleni imeko elungele ukukhula koqoqosho nophuhliso oluzinzileyo.
Kule meko, siza kuqhubekeka ukubeka phambili iimfuno zelizwekazi le-Afrika ngokomeleza iManyano yamaZwe ase-Afrika neziseko zayo, nokunika ingqwalasela eyodwa ekuphunyezweni kobuDlelwane obuTsha boPhuhliso lwe-Afrika.
Okubaluleke ngokufanayo, nokusichaphazela ngqo, kukomeleza ukudityaniswa kwemimandla kugxininiswe ngokukodwa ekuphuculeni indibaniselwano yepolitiki neyoqoqosho lweNkqubo yokuPhuhliswa kwaMazwe e-Afrika eseMazantsi (i-SADC), okujolise kwinjongo ye-AU yorhulumente woMdibaniselwano. Siza kuseka i-Arhente yoPhuhliso lobuDlelwane yaseMzantsi Afrika ukukhulisa ubudlelwane obuphuhlileyo kunye namaye amazwe elizwekazi. UMzantsi Afrika useza kuqhubeka ukuncedisa ekwakhiweni ngokutsha nokuphuhliswa kwelizwekazi i-Afrika ingakumbi kwiimeko ezisuka kwimfazwe. Siza kuqhubekeka ukukhuthaza isisombululo soxolo nesizinzileyo kwimfazwe yamaSirayeli namaPalestina esisekelezelwe kwisisombululo semibuso-emibini.
Siza kuzixhasa iinzame zoxolo zeManyano yamaZwe ase-Afrika kunye neZizwe eziManyeneyo kwilizwekazi le-Afrika, kuquka kwiRiphabliki yeSaharawi Arab kunye naseDarfur eSudan.
Ingxaki yabantu baseZimbabwe ibe nempembelelo engentle kummandla we-SADC, ingakumbi uMzantsi Afrika. Simema onke amazwe angabathandi-boxolo kwihlabathi ukuba axhase urhulumente oquka bonke abantu ukuphumeza ukuphucuka koqoqosho.
Siza kuzixhasa iinzame zommandla we-SADC ukusombulula imeko yaseMadagascar.
Ndivumeleni, zindwendwe ezibalulekileyo, ukuba ndothulele umnqwazi uMkhosi woKhuselo waseMzantsi Afrika ngendima enkulu oyidlalileyo ekwakheni uxolo kwilizwekazi.
Ngamaziko elizwekazi nawommandla, siza kusebenzela ekumiliseleni intando yesininzi nokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kwilizwekazi le-Afrika.
Siza kuba negalelo ekomelezeni ubudlelwane boMzantsi-kuMzantsi size silandele izivumelwano zokuxhamla ngokufanayo namazwe angundoqo oMzantsi.
Siza kuqhubekeka ukomeleza ubudlelwane noMntla ophuhlileyo kuquka i-G8, kunye nobudlelwane bethu bobuchule kunye neManyano yaMazwe aseYurobhu.
Siseza kuqhubekeka ukudlala indima ebonakalayo ekuqinisekiseni ukuqukunjelwa komjikelo wothetha thethwano lwe-WTO Doha Development.
Umzantsi Afrika, njengokuba ulilizwe elomileyo ufuna amanyathelo akhawulezileyo okuthothisa inguqu engentle yokusingqongileyo nokuqinisekiso ukubonelelwa ngamanzi kwabemi.
Phakathi kweenkqubo ezahlukahlukeneyo, siza kuphumeza isicwangciso-qhinga saManzi ukwenzela ukuKhula noPhuhliso, esiya komeleza ukulawulwa kwamanzi. Siza kuqhubekeka ukuphucula ukusebenza ngempumelelo kwamandla wethu kunye nokuthembela kwiindlela ezintsha zokusebenzisa amandla.
Isizwe esisaphuhlayo sifuna ukuphuculwa kweenkonzo zikarhulumente nokomelezwa kwamaziko entando yesininzi.
Siseke ubuPhathiswa obubini kwi-ofisi kaMongameli ukomeleza ucwangciso ngobuchule kwakunye nokuhlolwa nokuvavanywa komsebenzi.
Ukuqinisekisa ukunikezelwa kweenkonzo kwizibophelelo zethu, siza kubenza abaPhathiswa besiGqeba sombuso ukuba bakwazi ukuphendula bachaze ngomsebenzi abawenzayo ngenkqubo yokuhlolwa nokuvavanywa komsebenzi, ngokusebenzisa iinjongo ekujoliswe kuzo ezisekiweyo kunye nomlinganiselo womsebenzi owenziweyo.
Kwakhona siza kubandakanya amaShishini-aMnikazi wawo inguRhulumente namaZiko oPhuhliso lweziMali kwinkqubo karhulumente yokucwangcisa size siphucule ukuhlolwa nokuvavanywa komsebenzi wawo.
Malungu aHloniphekileyo, bemi baseMzantsi Afrika,
Ukuqinisekisa ukuba omathathu amazinga karhulumente – elasekhaya, elamaphondo nelesizwe – ayakuphucula ukuziswa kweenkonzo, siza kukhawulezisa ukusekwa kweNkqubo yeeNkonzo zikaRhulumente enye.
Olu lawulo luzakunyanzelisa ekubekweni kwabantu kuqala xa kuziswa iinkonzo. Siza kuqinisekisa ukuba abasebenzi abasebenza kwiikhawuntara ezingaphambili ukuba banikekezela ngenkonzo enembeko nenenkuthalo kuwo onke amasebe karhulumente.
Kweli xesha lovuselelo, siza kusebenzela kuburhulumente obuthe chatha ukuthungelana ngentsebenzo.
Ukukhokela ngokuba ngumzekeklo, umsebenzi wokusekwa kwendlela yokunxulumana koluntu ne-ofisi kamongameli sele kuqalile kwi-ofisi kaMongameli. Ukongeza kwiincwadi nee-imeyl eziveli eluntwini, sizakuvula kwanomnxeba othe ngqo wezikhalazo ukwenzela ukufikelela okulula.
Abasebenzi baza kusebenza ngophando lomntu ngamnye ngokungathi kukuphela kwalo, baluhambise kuwo onke amabakala lude lufumane ukuhoywa okulufaneleyo.
I-Arhente yeSizwe yoPhuhliso loLutsha, esekwe ngokudibana koMsobomvu Youth Fund neKomishoni yoLutsha yeSizwe iza kundululwa ngomhla we-16 kweyeSilimela Ekurhuleni. La maziko ayadityaniswa ngeenjongo zokomeleza iinkonzo namathuba ophuhliso anikezelwa kulutsha. Le Arhente iza kuba likhonkco phakathi kwabantu abatsha abanemfundo enomsila kunye namathuba ezoqoqosho; yomeleze amalinge okunabisa iNkqubo yeSizwe yeeNkonzo ixhase noosomashishini abasebatsha.
Somlomo noSihlalo, ziNdwendwe eziBalulekileyo,
Kule nyanga izayo uMadiba wethu othandekayo uzakugqiba iminyaka engama-91. Abantu kwihlabathi jikelele basaqhubekeka ukwenza intlokoma yokubakho kwakhe nokuba abahoyele iingxaki zabo. Ukuxabiseka kwakhe kunye nokuba ngumzekelo kwakhe ekuzinikezeleni ukukhonza umntu kungumzekelo oqaqambileyo kwilizwe elixakekileyo lanamhlanje. I-Nelson Mandela Foundation nemibutho enxulumeneyo ziqale iphulo lezizwe ngezizwe, elibizwa uSuku lukaMandela, olucacisa elubala ukuthi uTata uphilela ekholelwa entweni.
USuku lukaMandela luza kubhiyozelwa ngomhla we-18 kweyeKhala kunyaka ngamnye. Luza kunika abantu abase Mzantsi Afrika nakwihlabathi liphela ithuba lokwenza into entle ukunceda abanye.
UMadiba ube semzabalazweni iminyaka engama-67, kwaye ngoSuku lukaMandela abantu kwihlabathi jikelele, emisebenzini, emakhayeni wabo nasezikolweni, baza kumenywa ukuba bachithe imizuzu engama-67 ubuncinane kwixesha labo besenza into enokuba luncedo kuluntu lwabo, ingakumbi abo bangathathi ntweni.
Masithi ke ngeentliziyo zethu zonke sixhase uSuku lukaMandela sikhuthaze nehlabathi ukuba lizibandakanye kunye nathi kweli phulo ligqwese kangaka. Somlomo oHoniphekileyo noSihlalo, beMi baseMzantsi Afrika,
Inkqubo yethu yale minyaka mihlanu izayo siyithe thaca phambi kwesizwe. Isibophelelo ngasinye esisenzileyo sihamba nesicwangciso seprojekthi esicacisiweyo, kunye neenjongo eziphambili nezisekelo eziluqilima.
Ezi nkcukhacha ziza kwaziswa eluntwini kungekudala. Eneneni njengabemi kufanele ngaxesha nye sizibuze ukuba yintoni esinokuzenzela yona ngokwethu ukuncedisa ukuphucula le nkqubo yesizwe.
Ukuba ngummi akukho nje malunga namalungelo, kukwahamba noxanduva, lokwenza igalelo ekwenzeni ilizwe lethu libe lelingcono.
Sikwalindele ukusebenzisana kakuhle namaqela aPhikisayo ePalamente, ngomoya wokukhokelisa ilizwe lethu kuqala. Ukongeza apho, uMadiba wasifundisa kakuhle okokuba eli lizwe lelethu sonke, omnyama nomhlophe. Ukusebenzela uxolelwano nomanyano kuya kuhlala kubalulekile njengokuba sibheka phambili.
Ukusekela mhla kwaphunyezwa inkqubo yethu siza kuthatha indawo kuqoqosho oludodobalayo, kuza kufuneka sisebenze ngobulumko – kungabikho nkcitho, kungabikho kudluliselwa kwemali – isenti nganye kufuneka isetyenziswe ngokulumkileyo nangokuvakalayo. Kunyanzelekile ukuba sisebenzise uhlahlo lwabiwo-mali lethu ngokomlinganiselo wethu.
Bemi baseMzantsi Afrika, xa sisebenzisana kunye sonke singenza ngcono ukuqonda umbono wethu omnye nofanayo wesizwe esingcono nesihluma ngakumbi!
Obu bubudlelwane esibucelayo.
Last Modified: Wed, 05 Aug 2009 18:47:27 SAST